Soccer Knowledge : ကွင်းထဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေ ဘယ်လို ဘာသာစကား နဲ့ ပြောဆိုကြသလဲ ? - SPORTS MYANMAR
ဘာသာ စကား ဟာ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ဆက်သွယ် ပြောဆို တဲ့ အခါ မှာ အရေးပါတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ကနေ ပါဝင် နေပါတယ် ။ ဘောလုံး မှာ လည်း ဒီ အတိုင်း ပါပဲ ။ အထူး သဖြင့် ကစားပွဲ တွေ ကို တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ် ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ် တဲ့ ဒိုင်လူကြီး တွေ အနေနဲ့ ဘာသာ စကား ကျွမ်းကျင်မှု ဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် တစ်ခု လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ကွင်းထဲ မှာ ကမ္ဘာ အနှံ့ ကနေ ရောက်လာတဲ့ ကစား သမား ပေါင်းစုံ ကို ဘယ်လို ဘာသာ စကား နဲ့ ပြောဆို ကြသလဲ . . . စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းလှ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ ဖလား ဖိုင်နယ် ကို ပြန်သွား ကြည့်လိုက် ကြရအောင် ။ ပြင်သစ် နဲ့ ခရိုအေးရှား တို့ ကစား ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲ ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင် က အာဂျင်တီးနားသား ပါ ။ ကစား သမားတွေ က ပြင်သစ် နဲ့ ခရိုအေးရှား ဘာသာစကားတွေ ပြောပြီး ဒိုင်က စပိန် ဘာသာစကား ပြောသူပါ ။ သူတို့ ဘယ်လို ပြောဆိုခဲ့ကြ သလဲ ?
အင်္ဂလိပ် လို ပြောမှာ ပေါ့ လို့ ဖြေမိ ကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံး သမား တိုင်းက အင်္ဂလိပ် လို မတတ် ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ် တစ်မျိုးတည်း ပြောတတ် ရုံ နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ဒိုင်လူကြီး လုပ်မယ်ဆိုရင် တော့ အမှားကြီး မှားသွား ပါလိမ့်မယ် ။
ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ( FIFA ) မှာ တရားဝင် ရုံးသုံး ဘာသာစကား ၄ ခု ရှိ ပါတယ် ။ အဲ့ဒါတွေ ကတော့ ပြင်သစ် ၊ စပိန် ၊ အင်္ဂလိပ် နဲ့ ဂျာမဏီ တို့ ပါပဲ ။ အင်္ဂလိပ် ဟာ အဓိက ဘာသာ စကား ဖြစ်ပြီး ဖီဖာ လက်မှတ်ရ ဒိုင်လူကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အင်္ဂလိပ် လို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် ပြောဆို တတ်ဖို့ လိုအပ် မှာပါ ။
ဖီဖာ ဟာ ဒိုင်လူကြီး အကဲဖြတ် စာမေးပွဲတွေ ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာ နဲ့ ဖြေဆို စေသလို အစည်းအဝေးတွေ ကို လည်း အင်္ဂလိပ် လို ပြောဆို လေ့ရှိ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ ဖလား ၊ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင် နဲ့ ဥရောပ ဖလား ( ယူရို ) တို့လို ပြိုင်ပွဲကြီး တွေ မှာ အင်္ဂလိပ် လို အဓိက ပြောဆို အသုံးပြု ရပါတယ် ။
ဒေသတွင်း ပြိုင်ပွဲတွေ မှာ တော့ ဒိုင်လူကြီးတွေ ဟာ အထက်ပါ ဘာသာစကား ၄ မျိုး အပြင် ဒေသတွင်း ဘာသာ စကားတွေ ကို ပါ တတ်ကျွမ်း ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။ ကိုပါ အမေရိက မှာ ဆိုရင် စပိန် စကားကို အဓိက ပြောဆို ကြပြီး ဥရောပ မှာ ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ် ၊ ပြင်သစ် တို့ကို အဓိက အသုံးပြု ပြောဆို ကြပါတယ် ။
ဒိုင်လူကြီး နဲ့ ကစား သမားတွေ အကြား မှာ နားလည် သဘောပေါက်မှု ရှိဖို့ က အလွန် အရေးကြီးလှ ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် အငြင်းပွားဖွယ် ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ၊ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားချိန် တွေ မှာ ဒိုင်လူကြီး အနေနဲ့ သူ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်တယ် ၊ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတယ် ဆိုတာကို ကစားသမားက သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြ နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
ဒီနေရာ မှာ ဘာသာ စကား မျိုးစုံ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘောလုံး သမားတွေ ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ က အရေးပါ လာပြီး ကြားကနေ ဝင်ရောက် ဘာသာပြန်ပေး ကာ ကူညီပေး နိုင်ပါတယ် ။ ဒီလို အသင်းဖော်တွေ ရှိတာ ဟာလည်း အသင်း အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အားသာချက် ဖြစ်စေ ပါတယ် ။
ဘာသာ စကား ၄ မျိုး အပြင် ဒိုင်လူကြီးတွေ အသုံးပြု တဲ့ နောက်ထပ် အသုံးပြုတဲ့ ဘာသာစကား က တော့ Body language ပါပဲ ။ ပရို ဒိုင်လူကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အတွက် အခြေခံ ကျတဲ့ အချက်ပြမှု တွေ ကို သိရှိ တတ်ကျွမ်းဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။ ဥပမာပြောရရင် ပင်နယ်တီ ပေးတာ ၊ ပွဲသိမ်း တာ စတဲ့ အရာတွေ ကို သတ်မှတ် ထားတဲ့ အချက်ပြပုံစံမျိုးနဲ့ ပြသတတ် ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် စည်းကြပ် ဒိုင်ရဲ့ အလံ ၊ အဝါကတ် ၊ အနီကတ် တွေ နဲ့ ဒိုင်လူကြီး ခရာ တို့ဟာလည်း ကစား သမား တွေ နဲ့ ဒိုင်တွေ အကြား ချိတ်ဆက် ပေးတဲ့ ဘာသာစကား တွေ လို့ သတ်မှတ် နိုင် ပါတယ် . . . .